हुर्कन लागेको विष वृक्ष | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
हुर्कन लागेको विष वृक्ष
तिब्र गतिमा बढ्न लागेका विविध घटनाक्रमहरुले केही अभिव्यक्ति आवश्यक लागेको छ । उसरी त्यस्तो आवश्यकता र सरोकार निजि विषय भित्र पर्दछ किनभने यस्ता अभिव्यक्तिको कुनै सार्थकता, औचित्य, प्रभाव, प्रासांगिकता केबल कागज भर्नका लागि मात्र भएजस्तो लाग्छ । यसको परिणाम र महत्व केही छैन । यसमा सन्देह छैन ।
कुनै विषयमा पनि अपनत्व शुन्य भएपछि यस्तै हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा समय समयमा ठूला विवाद भए । दलिय भागबण्डा, मोलाहिजा, पक्षपात भयो भनेर वकीलहरुको संगठनबाट बेन्च बहिष्कार सम्मका घोषणा भए जुन कालान्तरमा गएर त्यो घुइतडीका शेड्याको हाक मात्र सावित भयो । नवनियुक्त माननीय सपथ ग्रहण लगत्तै विभिन्न दलका ठाउँमा नतमस्तक भएका संचार माध्यमहरुमा आउने गरेको पढ्न पाइयो ।
८० जना न्यायाधीश नियुक्तिमा वारका प्रतिनिधिले राती बी.बी.सी.लाई दिएको अन्तरवार्तामा अब कुनै नियुक्ति तत्काल हुदैन भनेको रातको ३ बजे नै निर्णय भएछ भनि प्रकाशनमा आयो । न्याय परिष्दमा एक सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश सामेल भएनन् । उसरी उनको कार्यकाल नियुक्ति भन्दा पूर्व सन्ध्यामा समाप्त भइ सकेको थियो र गोपाल पराजुली वरिष्टतम् भएर उनलाई सूचित गरिएको कही सुनिएन । को बाट न्यायाधीश भए भनि नाम समेत किटान गरी छापाहरुमा आयो । त्यसमा श्री सर्वाेच्च अदालतमा अनेक रीट उजुरी परेर विचाराधीन छन् ।
प्रहरी प्रमुख नियुक्तिका सम्बन्धमा केही घण्टा भित्र नै अन्तरिम आदेश जारी भए जबकि पार्वती थापाको त्यस्तै विषयवस्तुको रीट निवेदन ३ वर्ष देखि विचाराधीन रहेर लगभग निष्क्रिय पारिएको छ । एउटै व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश र मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षको सपथ लिइ रहदा त्यसमा परेको पेशी अनिर्णित र स्थगित राखियो । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश हुन भन्दा केही समय पूर्व वरिष्टतम सदस्य रामकुमार प्रसाद शाहले नोट अफ डिसेन्ट लेखेर न्याय परिषद्को निर्णय पुस्तिकामा खतरनाक टिप्पणी लेखे तर त्यस्ता व्यक्ति उनकै साथमा रहेर निर्णय गर्ने माननिय न्यायाधीश भइ छोडे । आइ.जी.पी. प्रकरणमा अन्तरिम आदेश गर्ने माननिय न्यायधीश स्वयं निर्णायक पेशीमा राखिए ।
१९ जना मध्ये अन्यलाई समावेश गर्न नपर्ने कुनै कारण देखिएन । यस्तो बेन्चबाट हेर्न मिल्दैन भनि महान्यायाधीशवक्ताले गरेको अनुरोध अस्वीकार गरियो र ३० जना वरिष्ठ अधिवक्तहरुले समेत बेन्च बहिष्कार गरे । महान्यायाधिवक्तको नेतृत्वमा सरकारी वकीलहरुको हड्ताल भयो । त्यसमा थामथुम पार्ने काम भएको छापाहरुमा आयो । यस्ता गतिविधिहरुको कारकतत्व को हो ? म्।ल्।ब्। परिक्षण विपरित निर्णय गरेर अनुहार मिल्यो भनि राय लेखी निर्णय गर्ने उपर कुनै कारवाही हुने थियो थिएन, तल्लो तहका निर्णयकर्ताहरुले त्यस्तै गरेको भए के परिणाम हुन्थ्यो ?
विशेष अदालतले गलत निर्णय ग¥यो भनेर एक जना सोझा न्यायाधीश कोमलनाथ शर्मा धुरुधुरु रुदै रीहा भएर तत्कालिन पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट रातको अध्यारोमा एक्लै गए । उनै संगका सह निर्णयकर्ता प्रधान न्यायाधीशको रोलक्रममा बसेका छन् । सरकारी कागज किर्ते गरेको छानबिनमा रहेका नवराज सिलवाल विरुद्ध कुनै कारवाही नगर्ने आदेश भयो । ऐन कानून निर्धाका लागि मात्र हो ? बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय अन्तिम भयो । त्यसमा आम माफिलाई श्री सर्वाेच्च अदालतले अस्वीकार मात्र गरेन ७ दिन भित्र पक्राउ गरी जेल चलान गर्न प्रहरी प्रमुखका नाममा आदेश भयो तर केही भएन हुन सकेन कारण पनि खुलाइएन । उनलाई अभिनन्दित गर्ने वर्ग पनि देखियो । तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको फीला च्याती दिन्छु भनि सार्वजनिक भाषण नै गरे । कानून कसका लागि प्रभावी बन्नु पर्ने भनि उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएन ।
संविधानमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको प्रयोग लोकमान प्रकरणमा पनि भएको हो । त्यसमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिए तर राजनैतिक खिचातानी दंभ र अहङ्कारको टकराव गुटगत समूह खडा गर्ने कारकतत्व एक व्यक्ति मात्र हुन् कि त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने भागबण्डा प्रवृत्ति पनि हो यसको जवाफ कहीबाट आउँदैन । निजि प्रतिक्रियाबाट कुनै सार्थकता नरहेको र दुषित वातावरण संग कुनै प्रत्यक्ष संलग्नता नहुदा केही लेखि रहनु मरुभुमिमा नदी नालाको कल्पना गर्नु जस्तै लाग्दछ ।
संविधान संशोधन विषयले देशलाई ध्रुवीकरणमा ल्याइ पु¥याएको छ । कर्ताहरुलाई लाग्ला यो सब गर्ने हामी हौं, हास्यास्पद छर्लङ्ग देखिने ग्राण्ड डिजाइन भित्र परेका पारिएका प्राणीहरुको मुल्याङ्कन नेपालको निकट भविष्यले देखाउने छ । आफै सहीछाप ढोक्ने अर्काे दिन भिन्नै प्रयोजन हो भन्ने निरीह प्राणी हो याद राख्न ! आफैले रोपेको विष वृक्ष हुर्कन लागेको छ ।
यसले दानवीय आकार ग्रहण गरी सकेको छ । उसरी क्रिया प्रतिक्रिया नेपालमा बस्नेहरुको एकाधिकार जस्तै भएको छ र भनि रहनु पर्दैन । नेपाल भन्ने शब्द अहिले पनि काठमाण्डौं नै हो भनी ग्रामिण समाजको दृष्टिकोण हो । यतिका र अझ गम्भीर विषय पनि पदवीले वरिष्ठ वकील भएको हुनाले नलेखी रहन सकेन । यद्यपि कुनै भ्रम छैन । यसको प्रतिध्वनि यसै कागज भित्र छ र अस्तित्वको नै ठेगान नभएका प्राणीहरुका लागि बाँकी के नै हुन सक्छ ? दर्शकदीर्घामा बस्नेहरुको त केवल मूक दर्शक मात्र बनि रहनु पर्ने नियति स्वभाविक पनि छ ।
← के अब नेपाल कानूनी राज्य नै रहला ?
क्रेसर उद्योगको पछि किन पर्छन ? →